कसरी गर्ने लक्ष्मी पूजा ? यस्तो छ विधि « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	||4November, 2021
लक्ष्मी पूजाको रातलाई सुख रात्रि पनि भनिन्छ । सुख रात्रिमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्दा भौतिक सुखको साथसाथै आध्यामित्क सुख पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने लोक विश्वास छ । धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सन्तान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्दा अज्ञानरुपी अन्धकार हटेर ज्ञान प्राप्त हुन्छ ।
लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नाले धन सम्पत्ती प्राप्त हुन्छ भन्ने साधारणको बुझाई छ । तर,सम्पत्ती भनेको आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य ज्ञान सबै धन नै हो । यी सबै कुरा प्राप्त गर्नको लागि लक्ष्मी पूजा गरिन्छ ।
धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गर्नाले घरमा लक्ष्मीको बास हुने तथा सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । बत्ती नबालेको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने भनाइ अनुसार साँझ घरको चारैतिर सफासुग्घर गरी दैलो, संघार, झ्याल, ढोका, कौशी, भ¥याङलगायतका ठाउँमा बत्ती बाली लक्ष्मीको स्वागत गरिन्छ ।
दाजुभाइले एक अर्कालाई लगाइदिए भाईटीका « Mero LifeStyle
[…] कुकुरकी अन्नदाता : स्नेहाकसरी गर्ने लक्ष्मी पूजा ? यस्तो छ विधिसयपत्री सप्रिदा किसान मख्ख : […]
हराउँदै देउसी भैलोको रौनक « Mero LifeStyle
तिहारमा मादलको माग कम, आर्थिक संकटमा वादी समुदाय « Mero LifeStyle
यस्तो छ म्हः पूजाको महिमा, कसरी गर्ने ? « Mero LifeStyle